Isifundo esitsha senza ukuba kucace: iilogo ezincinci azithengisi | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ukusuka kwinto entsha eqokelela isifundo, kubonakala ngathi kunjalo zonke ezo logo zincinci eziye zoyilwa, bezingenantsingiselo kwaphela. Kubonakala kunjalo ayenzi loo nto uyifunayo kubathengi okanye kubathengi, kodwa ngenye indlela ejikelezayo, iyabaphosa.
Ndiyathetha, yintoni cinga ngokwenza ilogo echazayo Endaweni yezo zinto zincinci, ezivela kumbono womyili, ezingaphezulu kokugqwesileyo, kodwa kwabo baya kucela inkonzo okanye bathenge into okanye umthengi olungileyo, hayi fu okanye fa, njengoko umntu esitsho.
Olu phononongo lwamva nje lugcina oko abathengi bakhetha ilogo echazayo kunezo logo ezincinci eziqhubekayo. Kwaye kwakudala, ezi logo zincinci zaziphumelela ngokweengcali, nangona zizimpawu ezichazayo ezikhokelela kwisikhephe emanzini kudidi ngalunye.
Uphononongo ngokwalo, olupapashwe kwiJenali yokuThengisa kwakhona, isekwe kwinto yokuba ilogo echazayo iphumelele ngakumbi ekuveliseni "ukuthembela". Uphando olwenziwe ngoonjingalwazi abavela eCanada, eNgilani naseFrance baphonononge iilogos ezingama-597 zizonke, ezithi, ngoncedo lwabathathi-nxaxheba abangama-2.000 XNUMX, zabakhokelela ekufumaneni ukuba eyona logo ichazayo, ziziphumo ezincomekayo ngakumbi ekuprintweni. kwaye, ke, ngenjongo yokuthenga.
Eyona nto uyifunayo, njengoko isenzeka ngaloo magama asinika isikhokelo kumaphepha ethu okufika. Abathathi-nxaxheba kolu phando ifumene iinkcazo ezivela kwiinkampani ezahlukeneyo kubo ukuba bagwebe ubunyani beelogo zabo. Ukucacisa ekugqibeleni ukuba kukho ubudlelwane obubaluleke kakhulu phakathi kwenkcazo yelogo kunye neenzuzo ezipheleleyo.
Singathetha ngomzekelo: Ubuncinci kwilogo entsha yeSlack. Kodwa zininzi iilogo ezingaqondakaliyo eziphulukana nentengiso bebodwa. Ezo zeCitroën, Mastercard, Mitsubishi Motors nezinye ezininzi. Ewe kunjalo, khumbula ukuba xa inkampani inkulu ngokwaneleyo, inokuphepha ukuba nelogo echazayo kwaye isekwe kwinto encinci, njengoko kunjalo ngo "M" kaMcDonalds kunye esizibonileyo kumaxesha alandelayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Ukuba uza kwenza ilogo encinci kumthengi okanye kwinkampani yakho, tshintsha ingqondo yakho